Festival Moudjangaya M’chimé : Tsara fiditra ny Ascut sy ny ASCB -
AccueilVaovao SamihafaFestival Moudjangaya M’chimé : Tsara fiditra ny Ascut sy ny ASCB
Nanomboka tamin’ny fomba ofisialy ny sabotsy 5 mey teo, ary tsy hifarana raha tsy ny alahady 13 mey izao ny andiany voalohany amin’ny « Festival Moudjangaya M’chimé » ao Mahajanga. Hetsika sy fifaninanana ara-panatanjahantena eo amin’ny taranja basikety lehilahy, sokajy N1A sy « vétérans » lahy sy vavy, taranja baolina kitra lalaovina amin’ny tora-pasika na beach soccer. Tonga nanome voninahitra ny lanonam-panokafana ireo solontenam-panjakana tany an-toerana, ny minisitry ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra.
Teo amin’ny taranja basikety, avy hatrany dia tsara fanombohana sy tsara fiditra ny Ascut Atsinanana sy ny ASCB Boeny, mpampiantrano. Ny Ascut nandresy ny AS Victoire Boeny tamin’ny isa 80 noho 74. Eny, fa na nitarika tamin’ny isa aza ny AS Victoire teo amin’ny ampahefa-potoana voalohany (24 – 14). Tany amin’ny ampahefa-potoana faharoa, nanomboka tafiditra ireo mpilalaon’ny Ascut toa an-dry Tolotra, Tanjona, Did’s sy Mbola ary Ibrahim sy ny namany, ka nanenjika ny isa avy hatrany. Nanomboka teo, dia nitarika hatramin’ny farany Ascut. Nisaraka tamin’ny isa 38 noho 34 ny roa tonta teo am-pakana aina, ka ny Ascut no nitarika.
Toraka izany koa no nandavoan’ny ASCB mpampiantrano ny Cospn Analamanga. Nampiseho ny tanjany sy ny fahaiza-manaony ry Bila sy Livio ary Faralahy sy ny namany avy amin’ny ASCB tamin’izany, ka tafavoaka mpandresy tamin’ny isa mazava 80 noho 65.
Nambaran’ny tompon’andraikitra mpikarakara, Emile Rakotomalala, tamin’izany fa araka io anarana nampitondraina ny hetsika io, fampiraisana ireo tanora sy ny olona ao anatin’ny fifankatiavana ny « Festival Moudjangaya M’chimé ». Ny vola rehetra azon’izy ireo mandritra ny hetsika kosa, raha ny voalaza hatrany, dia hoentin’izy ireo hanampiana ireo fikambanana maro samihafa ao Mahajanga.
Marihina fa ahitana fandraisana anjaran’ny faritra maro ity hetsika ity. Ankoatra an-dry zareo mpampiantrano, tazana mandray anjara i Morondava, Brickaville, Toamasina, Antananarivo, Toliara, sns. Mitohy kosa ny fifaninanana eo amin’ny taranja basikety sy ny beach soccer.
Tsy honohono intsony fa tena misy. Nisy namarotra tokoa ny tany sy tranom-panjakana, ny Villa Elisabeth, izay nitoerana sy nipetrahan’ny Filoha teo aloha Zafy Albert sy ny vady aman-janany eny Ivandry. Tamin’ny Fitondrana Tetezamita no ...Tohiny